China ọkụ na -ere Pe ntekwasa n'elu nri ọkwa ọkwa mmanụ maka ụlọ ọrụ iko na ndị na -ebubata ya Akwụkwọ doro anya
ọkụ na -ere Pe ntekwasa n'elu Food mezuwo mmanụ àmà Akwụkwọ maka iko
Ebipụtara: Onye na -akwado iko
Mbipụta: Jiri Ink mmiri
Ụdị: na mpịakọta na na mpempe akwụkwọ
Oge nzipu: ụbọchị 25 mgbe ị natasịrị nkwụnye ego
Ojiji: maka ime iko, iko ofe na igbe
Ogo: Enweghị mgbapụta, rapara nke ọma na ọkwa nri
*Akara Akwụkwọ doro anya
*Ụdị Pee mkpuchi akwụkwọ
*Nlereanya 4 oz-24oz
*Ụdị ihe PE NA PLA
*Mbukota Site na katọn
* Mbipụta Mbipụta Flexo
*Etiti oge 30 ụbọchị mgbe nkwụnye ego natara
Eco Enyi na Enyi Elu dị elu nke ejiri mkpuchi kpuchie PE maka ịme iko iko
Ogo iko mmanya ọ Hotụ Hotụ
Akwụkwọ A Dụ Ọkụ na -atụ aro
Nha iko mmanya oyi
Akwụkwọ ntu oyi na -atụ aro
Ihe ọkwa nri
1. Akwụkwọ ọkwa iko akwụkwọ nri
2. ihe ọkwa PE ihe nri
3. SGS gbaara akwụkwọ, Nlele Nnwale Mba bụ: GZAFF160910888ME
1. Ala dị larịị enweghị mkpọtụ.
2. Nwere ike ịwụsa ihe nkiri ogbi na ihe nkiri na -enwu gbaa.
1. pallet juru n'ọnụ, ọ dị mfe ibutu & ibudata.
2. Poly osisi nwere pallet, fumigation efu.
3 inch bụ nha nke isi. Enwekwara ụfọdụ igwe na -ebi akwụkwọ chọrọ ka isi ya bụrụ 6 inch.
Ya mere, anyị na -eme ka isi anụ ọhịa atọ nke anụ ọhịa atọ na nke anụ ọhịa 6 dị.
2. Akwụkwọ Kraft kechiri n'èzí:
Akwụkwọ Kraft siri ike ma ọ dị mma ichebe mpịakọta akwụkwọ site na ọkọ ma ọ bụ mmebi.
3. Ihe nkiri PE kechiri n'èzí:
Ihe nkiri PE bụ maka igbochi mpịakọta akwụkwọ site na uzuzu na iru mmiri, ka akwụkwọ mpịakọta ahụ wee kpọọ nkụ ma dị ọcha.
4. Ịkwanye pallet:
Pallets na -eme ka akwụkwọ mpịakọta ahụ dị mfe maka ibugo na ibudata.
Nke gara aga: PLA kpuchie akwụkwọ Biodegradable nke ejiri 100% ihe nwere ike imebi PLA na -ejikarị maka iko na ọkwá
Osote: Akwụkwọ kraft 100% mepere emepe maka ngwugwu
250 gsm pee akwụkwọ maka iko akwụkwọ
akwụkwọ kọfị pe ntekwasa akwụkwọ ọnụahịa
ahaziri size ọcha pe ntekwasa akwụkwọ cup ofufe
greaseproof pee ntekwasa akwụkwọ iko
elu akwụkwọ peated cup cup
akwụkwọ dị elu pe ntekwasa maka iko akwụkwọ
akwụkwọ ahụ na -ekpuchi akwụkwọ
pe ntekwasa iko akwụkwọ akụrụngwa
pe ntekwasa akwụkwọ
pe ntekwasa akwụkwọ iko
pe ntekwasa akwụkwọ ofufe
pe ntekwasa akwụkwọ akụkọ na china
pe ntekwasa akwụkwọ maka efere efere
pe ntekwasa akwụkwọ mpịakọta
mpempe akwụkwọ iko mmiri dị 250gsm pe